Archive du 20200103
Marc Ravalomanana Nanolotra vahaolana hivoahana amin’ny krizy
Nandritra ny lanonana fifampiarahabana noho ny taom-baovao 2020 teny amin’ny trano fonenany eny Faravohitra omaly no nanambaran’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa ny fahatsapana fa miha sahiranana ny vahoaka Malagasy.
Senatera Riana Andriamandavy VII Nanakiana mafy ny fitondrana Rajoelina
Hita tamin’ny pejy facebook’ny loholona Riana Andriamandavy VII omaly ny fanambarana nanao hoe : “rehefa natao ny fampitahana Andriamatoa filoha dia mbola ny zava-bitanao no misongadina sy azo tsapain-tanana ka mbola isitrahan’ny mpitondra ankehitriny”.
Rivolala Kohen “Ho mafy ho an’ny Fitondrana Rajoelina ny taona 2020”
Tena taona mafy ho an’ny fitondrana Rajoelina sy ny ekipany ity taona 2020 vaovao ity hoy Kohen Rivolala, mpitarika ny finoana Jodaisma hebraika, mpitsabo amin’ny alalan’ny ctic ctac dou eny Ambonisoa Itaosy.
Vondron’ny mpanohitra Hanatanteraka kongresy lehibe ny RMDM
Fantatra omaly nandritra ny kabarin’i Marc Ravalomanana teny Faravohitra fa hanao ny kongresy lehibe voalohany ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia ( RMDM) amin’ ity taona ity.
Fanakonana fahantrana « Kitolotolotra no ataon’ny fanjakana »
Tsy tokony ho variana amin’ireo fanomezana kely hitan’ny maso sy mahavita iray andro fotsiny ataon’ny fanjakana ny vahoaka Malagasy hoy ny Solombavam-bahoaka teo aloha, Marie Zenaïde Ramampy Lechat.
Faritra Andrefan’ny Nosy Ahiana ho tondraka ny rano
Naharitra tokoa saingy madinika ny rotsak’orana teto Antananarivo nanomboka ny alin’ny 31 desambra ka hatramin’ny halina.Somary natevina kosa ny tany amin’ny faritra hafa.
Fitsarana Misy foana ny fampandehanan-draharaha
Mandeha miadana ireo ratsam-pitsarana amin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatry ny fitsarana toy izao.
Zandary nitifitra olona Efa nidoboka any am-ponja
Efa notanana am-ponja avy hatrany ilay zandary nitifitra raim-pianakaviana iray vokatry ny hasarotam-piaro teny Ivato ny alin’ny 31 desambra 2019 teo araka ny fampitam-baovao eo anivon'ny zandarimariam-pirenena.
Fitsinjarana ranon’ny JIRAMA Ho avy ny manampahaizana vahiny hanadio ireo fantsona
Nivaky ny filoha Rajoelina nandritra ny kabariny ny 31 desambra lasa teo fa tena mandohalika ny orinasa Jirama noho ny olana eo amin’ny fitantanana, fahanteran’ny fitaovana.Mihoatra ny 60 taona ny ankamaroan’ireo fitaovana toa ny fantsona mitondra rano,
Jeneraly Richard Ravalomanana Namporisika ny zandary hazoto hiasa any ambanivohitra
Omaly 02 janoary 2020 tamin’ny 08 ora sy sasany maraina tao amin’ny Toby Jeneraly Philibert Ramarolahy Betongolo no nanatanterahana ny lanonana ara-miaramila fiarahaban’ny mpiara-miasa an’Andriamatoa Jeneraly
Barea 2020 Ludovic Ajorque no mety ho laharana faha 9 vaovao
Hatramin’ny taona 2018 no efa nanomboka ny fifandresen-dahatra teo amin’ny mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina Kitra na ny Barean’i Madagasikara,
Grand Defi de Kick Boxing Ady miisa 40 no hatrehana
Hikarakara hetsika lehibe antsoina hoe “Grand défi de Kick Boxing” etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina amin’ny alahady 05
Basikety ALL STAR 2019 Lavon’ny faritra Avaratra ny faritra Atsimo
Nifarana tamin’ny alahady 29 desambra lasa teo ny fifaninanana basikety All Star Toliara 2019 ka nandavoan’ny faritra Avaratra
Basket Tournoi Challenge Baobab 2019 Samy nanao poa-droa ny Sepa sy Jsb
Nifarana tamin’ny alahady 29 desambra 2019 lasa teo tao amin’ny Complexe Sportif ao Mahajanga ny fifaninanana basikety “ Tournoi Challenge Baobab ”
Vazivazy zaritenany !
Taona 2020. Taona 20/20. Izany no vazivazy fanirian’ireo mirary ny haha taon-jina tsy misy tomika ity taona vaovao 2020 ity.
Fizahan-tany 348 660 ireo nitsidika an’i Madagasikara tamin’ny 2019
Mbola mila ezaka hatrany i Madagasikara eo amin’ny Sehatra fizahan-tany.
Lamba landy Mampiseho ny tena maha-Malagasy
Misy ny akanjo mariazy vita amin'ny lamba landy ary efa maro ireo tanora manorina tokantrano no liana amin’izany. "Mariazy mampanofinofy" no lohahevitra tamin'ny fampiratiana andiany
Seha-pihariana eto Madagasikara Misy paikady maro tokony hampahafantarina
Mametraka ny fahamarinan-toeran'ny fitondrana eo amin'ny lafin'ny iraisampirenena sy ny eto an-toerana no nataon’ny filoham-pirenena tao anatin’ny kabariny firarian-tsoa ho an’ny taona vaovao, raha ny fahitan’ny mpanao politika, Dany Rakotoson, azy.
Ministeran’ny fanabeazam-pirenena Hijery ny fari-piainan'ny mpiasa
Tetikasa maro hanatsaràna ny kalitaon'ny fanabeazana no vinavinain'ny ministeran' ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana teknika ary fanofanana arak'asa amin'izao taona 2020 izao hoy ny minisitra Volahaingo Marie Thérèse.
RINDRINA NIHOTSAKA NAMONO OLONA
Dimy no maty teto an-drenivohitra tamin’ny taom-baovao. Ny efatra tamin’ireo dia ankohonana iray tetsy Ambohidrapeto.
Taona 2020 15 andro no tsy hiasana
Miisa 15 ireo andro tsy hiasana amin’ity 2020 ity noho ireo fety sy daty manokana manamarika ny fiainam-pirenena, efa andro alahady anefa ny 6 amin’izy ireo , izany hoe efa
Antananarivo renivohitra sy ny manodidina “6 maty, 22 ny mpanendaka tratra nandritra ny fety”
Olona efatra maty nianjeran’ny rindrim-bato teny amin’ny faritra Ambohidrapeto, Itaosy nandritra ny fety, raha ny tatitry ny polisim-pirenena raha ny tatitry ny polisim-pirenena tamin’ny mpanao gazety omaly , teny amin’ny efitrano fiasan’ireo mpitandro filaminana Anosy.
Rotsak’orana be loatra Nandray fepetra ny BNGRC
Manoloana ny rotsak’orana betsaka sy mifanesy eto Antananarivo amin’izao fotoana izao dia misy amin’ireo tany sy vato indray no ahiana hihotsaka.
Tanjombato Nitsoraka tao ambany tetezana ilay taksi
Nitohana izay tsy izy ny fifamoivoizana teny Tanjombato omaly maraina, tsy fanamboaran-dalana akory fa noho ny loza izay nitranga.Fiara Peugeot 205, izay taksi no tsy tafavily
Fitsirihana tahan’ny alikaola amin’ny mpamily Nahoana moa no tsy atao mandava-taona ?
Matetika amin’ny vaninandro fety tahaka ny hoe krismasy, faran’ny taona, Paska, Pentekosta izay mampitombo ny fifamoivoizana no manao ilay fitsirihana
Jery todika fety - HJRA Betsaka ireo vehivavy mamoifo
Antsasaky ny lehilahy latsaka ny salanisan'ny vehivavy niditra tao amin'ny Hjra nandritran'ny fetin'ny faran'ny taona sy ny afak'omaly taom-baovao. 166 ny fitambaran'ny tovolahy sy raim-pianakaviana raha 69 ny andriambavilanitra.
Alasora Voasambotra ireo mpivarotra merkiora sandoka
Lehilahy roa no voasambotry ny Polisin’Alasora ny alatsinainy teo rehefa avy nisoloky olona saika hividy merikiora sandoka izay vatan’akondro sy tantely tamin’ny tavohangy ary ody gasy maro sy gazety nofonosana lambamena no tao anatiny .
Reraky ny fety ny mponina Mirongatra ny asan-jiolahy eny Itaosy
Nanararaotra ny harerahan'ny mponina vokatry ny fety sady tao anaty orana ny jiolahy teny amin'ny tanana iray tao Ambavahaditokana Itaosy.